एकादूई राजा असल हुनसक्छन तर राजतन्त्र असल किमार्थ हुनसक्दैन | BikalpaNews.com- the most popular online magazine of Nepal
Home विचार एकादूई राजा असल हुनसक्छन तर राजतन्त्र असल किमार्थ हुनसक्दैन
एकादूई राजा असल हुनसक्छन तर राजतन्त्र असल किमार्थ हुनसक्दैन
भदौं भदौं ११ गते ।
ऋग्वेदको अष्टमध्यायमा प्रगाथ काण्व नाम गरेका ऋषिरचित एउटा ऋचा संकलित छः—“अपाम सोमममृता” (ऋ.८।४८।३) । रक्सी पिएर मातेका ऋषि काण्वलाई रक्सी पिएपछि अब आफू अमर भएजस्तो लाग्छ । हुन पनि रक्सी पिएको मान्छेले आफूलाई सबैभन्दा बलवान, सबैभन्दा विद्वान, सबैभन्दा बुद्धिमान, सबैभन्दा जान्नेसुन्ने, सबैभन्दा राम्रो ठान्न थाल्छ । त्यसको कारण मद हो । नसाले मान्छेको मष्तिष्कलाई भ्रमित हुनेगरी असर गर्छ । त्यो अवस्था ज्ञानसून्यताको हो । विवेकसून्यताको हो । त्यस्तो अवस्था चेतनासून्यतामा गएर टुङ्गिन्छ । हालसालै एकजना प्राडाले पूर्वमहाराजको दर्शन भेट पाएपछि सार्वजनिक रुपमा “अब गणतन्त्रको औचित्य समाप्त भयो” भनिदिए ! त्यो उनको विवेक होइन, भ्रम बोलेको थियो । कसैकसैलाई नसालाग्ने बस्तु सेवन गर्न पर्दैन । सुँघ्दा मात्रै पनि लाग्छ । राजनीति पनि नसा हो ।
सत्तामा त झन ठूलो नसा हुन्छ । ती प्राडा मदहोस भएर बर्बराउनुमा काल्पनिक सत्तामादकै प्रभाव हुनुपर्छ । महाराजको दर्शन गरेपछि उनी मन्त्रमुग्ध भए होलान् । साक्षात नारायणको दर्शन पाएको अनुभूति भए होला । महाराजका वाणीहरु देववाणीजस्ता लागे होलान् । महाराजको आज्ञाअनुसार राजसंस्था पुनस्थापनामा आफूले सघाएको कल्पना गरे होलान् । त्यसवापत महाराजबाट ठूलो पद वरदानमा प्राप्तभएको कल्पना गरेहोलान् । त्यही तन्द्रामै उनलाई पत्रकारहरुको फेलापरे होलान् । उनले पनि नसाको सुरमा आफूले फुमन्त्र भनेर एक चुटकी खरानी उडाइदिए पछि गणतन्त्र भष्म हुन्छ भन्ने कल्पना गरेर होलान र अर्ध चेतनामै भ्रमवस अनर्गल प्रलाप गर्नपुगे होलान् ।
नेपालमा एकसे एक कल्पनाशील मानिसहरु जन्मन्छन् । आफ्नो कल्पनाशीलता महाकवि देवकोटाले कवितामा व्यक्त गरेथे । विमान पण्डित भनेर चर्चित भएका धादिङे ब्राह्मणले राणकालमै बाँसको जहाज बनाएर उडाएथे रे । त्यो पनि कल्पनाशलतााके अब्बल उदाहरण हो । सबैमा त्यस्तो क्षमता हुदैन । कविता लेख्ने सीप छैन भन्दैमा मान्छेमा कल्पनाशीलता नै हुदैन भन्न मिल्दैन । न वैज्ञानिक आविष्कार गर्न नसक्दैमा मान्छे कल्पनाशील हुदैन भन्न मिल्छ । मात्राको घटीबढीको कुरा मात्रै हो, प्रकृतिले कसैलाई पनि त्यो गुणबाट वञ्चित गरेको हुदैन ।
हाम्रा प्रधानमन्त्रीले हालसालै हो क्या रे –“एकथरी मान्छेहरुले गणतन्त्र उल्ट्याउने षडयन्त्र गरिरहेका छन्” भनिदिए । त्यो उनको कल्पना थियो । किनकि कसैले उनका सामु उभिएर गणतन्त्र उल््ट्याउँछु त अवश्य भनेन । प्रधानमन्त्री भेष बदलेर तीत्यस्ता मान्छेको चियो गर्दै हिँडेका पनि अवश्य थिएनन् होला । त्यसैले प्रतिगमनको सम्भावना हाम्रा प्रधानमन्त्रीमा रहेको कल्पनाशीलताको वेजोड उदाहरण होजस्तो लाग्छ ।
कल्पनाशीलताको अधिकताले मान्छेलाई व्यर्थैमा दुःख दिन्छ रे ! प्रधानमन्त्रीको त्यो कल्पनाले स्वास्थ्योपचारमा सिंगापुर पुगेपनि देशमा प्रतिगमन भैहाल्छ कि भन्ने चिन्ताले सुविस्तासँग आराम गर्न÷निदाउन पनि दिएन होला र हतारो हतारो देश फर्कन विवश बनाए होला । नत्र दूई सातापछि फेरि उतै जानुपर्नेगरी किन आउँथे र ? वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनमा आफ्नो उति ठूला भूमिका नभए पनि आफूलाई अहिलेको यो उचाईमा पु¥याएको त त्यही परिवर्तन ले हो भन्ने कुरा मनमा त अवश्य छ क्यारे । यो व्यवस्थाको गुन हाम्रो प्रधानमन्त्रीले कसरी भूल्न सक्छन् र ? चिन्ता त लाग्ने नै भो नि विचरा !
गफगाफमा मात्र होइन, साहित्यमा पनि उपमाको रुपमा “स्याल हुइयाँ” भन्ने वाक्यांश बाक्लै प्रयोग हुन्छ । चुनिएको होइन, आफ्नै पहलबाट बनेको स्यालहरुको नेताले आकाशतिर फर्केर “ओ……..हुँ…ई….याँ” भन्ने विरक्तलाग्दो नाद निकाल्नासाथ आवाज कानमा पर्ने जति सबै स्यालहरुले आफ्नो वर्तमान अवस्थाको समेत ख्याल नगरिकन कराउन थाल्छन् । नेतालाई साथ दिन्छन् । त्यो स्यालधर्म हो । कुखुरो चोर्न खोरभित्र पसेको रहेछ अथवा मुुखमा कुखुरो च्यापेकै रहेछ भने पनि नेताको आवाजको उपेक्षा गर्न सक्तैन र कराउन सुरु गरिहाल्छ । खोरभित्रै कराउँन थाल्दा कुखुरोको मालिकको फेला परिएला भन्ने विचार गर्दैन ।
मुख खोलेर चिच्याउँदा मुखमा च्यापिएको कुखुरो फुत्केर भाग्ला भन्ने चेत पनि रहँदैन । प्रतिगमन फर्काउने प्रयत्न हुनथाल्यो भन्ने प्रधानमन्त्रीको आवाज सुनेपछि दुई नम्बरका अध्यक्षले पनि बोलीमा लोली मिलाएर भनदिए – “धेरै ताउर माउर नगर, नागर्जुनबाट पनि खेदिमागौला है ।” त्यो स्यालवंशको सिको थियो । त्यसमा कुनै दम थिएन । सोचीविचारी भनिएको कुरा पनि थिएन । जसरी “हुइयाँ” को शाब्दिक अर्थ कुनै भाषाशास्त्रीले निकाल्न सक्तैन, त्यसैगरी भाका छोप्नेहरुको आवाज जति ठूलो भएपनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन ।
ती दुई नेता हक्कान्निएको देख्दा आश्चर्य लाग्छ । राजसंस्था फर्काउँछौं भन्न पाउने अधिकार जनतालाई उनीहरुले नै दिएका हुन् । “हुन्छ” र “हुन्न” को संसदीय स्याल हुँइयाँको छोटो बाटो प्रयोग गरेर संविधान पारित गरियो । संविधानमा अपरिवर्तनीय कुनै प्रांवधान राखिएन ।
दुइतीहाईको संसदीय बहुमतबाट संविधानभित्र परेका सबै प्रावधानहरु च्यातचुत पार्न मिल्ने व्यवस्था गरियो । अनि यतिखेर कसैले संविधानप्रदत्त अधिकारको उपभोग गर्छु भन्दा देख्लास् पर्खलास् भन्न मिल्छ र ? जनताको मुख न संविधानले थुन्न सक्छ न बन्दुकले । पञ्चायती व्यवस्थालाई संविधानतः निर्विकल्प भनिएको थियो । विरोधमा लेखे बोलेवापत कानूनतः दण्डित हुनुपथ्र्यों । मान्छेहरु सडकमा उभिएर विरोधमा बोले त ! “मुर्दावाद” भने, “खारेज गर” भने । २०४७ साले संविधानले राजतन्त्रलाई अपरिवर्तनीय भनेको थियो ।
मानिसले गणतन्त्रको माग गरे, नाारयणहिटीको ढोकै अगिल्तिर पुगेर गद्दी मात्रै होइन, देश समेत छोड भने त जनताले ! कानुन र संविधानले जनताको मुख थुनेन त ? यतिखेर संविधान र कानूनले बर्जित गरेको छैन । नेताजीहरुको धम्की र घुर्कीले जनताको आवाज रोकिएला भनेर कसरी कल्पना गरेका होलान् कुन्नी ?
अर्काथरी यतिखेर बहुदलीय लोकतन्त्र र गणतान्त्रिक लोकतन्त्र दुबै असफल भयो । राजतन्त्र पुनस्थापना गर्नुप¥यो भनेर कराउन थालेका छन् । हो, उनीहरुलाई संविधान र कानूनले बोल्न प्रतिवन्ध लगाएको छैन तर के बोल्ने के नबोल्ने भनेर विवेक प्रयोग गर्नु पर्दैन ? शब्दकोशमा छ भन्दैमा समाजले अस्लिल मानेका शब्दहरु सार्वजनिक ठाउँमा प्रयोग गर्न थालियो भने समाजले के भन्छ ? गतिछाडा भन्ला ।
अति भयो भने पागल भनिदेला । असफल भएकै हो भने सरकार असफल भए होला । व्यवस्था असफल भैहाल्यो भन्न त कसरी मिल्छ र ? राजतन्त्रको पुनस्थापना भन्ने शब्द जनताको दृष्टिमा अस्लिल भैसक्यो । त्यस्तो शब्द उच्चारण गर्नु अस्लिल शब्दोच्चारण गरेजस्तै हो । वर्जित चेष्टा हो । अलिकता विकेक हुनेले त्यस्तो आवाज निकाल्न समेत आफै लाज मान्नुपर्छ । शब्दोच्चारण गरेवापत कानूनले दण्ड नदिए पनि समाजले दण्डित गर्नेछ । समाजमा दुर्नाम होइननेछ भन्ने हेक्का राख्नु पर्दैन ।
त्यस्तो चेष्टा समाजमा निक्रिष्ट मानिनेछ । हो, नेतृत्व असफलतातिर उन्मुख छ । फुजखर्चीतिरउन्मुख छ । विलासितातिर आकर्षित छ । जनता र समाजलाई बिर्सिन थालेको छ । त्यस्तो प्रवृत्तिको विरोध गरौं । सच्चिने आग्रह गरौैं । सच्चिदैनौं भने देखलाउ पर्खलाउ भनौं । अर्को निर्वाचनमा सिनित्त बढारिदिने चेतावनी दिउँ । सच्चिएनौ भने तिमीलाई दण्डित गर्ने नयाँ सरकार चुन्छौं भनेर पाकिस्तान, कोरिया र मलेसियाको उदाहरण अघि सारौ ।
तर व्यवस्था उल्टाउने नादानीतिर नलागौं । त्यो अनैतिक प्रयत्न हुन्छ । राजतन्त्र विश्वअभ्यासमा सबभन्दा खराब ठहरेको व्यवस्था हो । हो, केही राजाहरु असल हुन सक्छन् तर राजतन्त्र आफैमा असल हुनै सक्तैन । हो, केही नेताहरु खराब होलान् तर गणतन्त्र खराब हुनै सक्तैन । बरु यसलाई जनमुखी बनाउने कसरततिर लागौं । यो सर्वोत्तम व्यवस्था ठहर्ने छ । “सौताको रिसले लोग्नेको काख भिजाउने” भनेजस्तो नेताको रिसले व्यवस्थाको धुरी फाल्ने नादान चेष्टा नगरौं है विद्वान मित्रहरु !
हाम्रो देशमा पारस शाह नाममा एकजना पूर्व युवराज थिए भन्ने कुरा नेपालीहरुले बिर्सिसकेका छन्जस्तो लाग्दैन । राजाको छोरो हुँदैमा सबै युवराज हुन पाउँदैनन् । युवराज भनेको राजा हुने योग्यताको प्रमाणपत्र हो । पारस शाहलाई त्यो प्रमाणपत्र मिलिसकेको थियो । पारस शाह ढिलोचाँडो गद्दीनसिन हुने कुरा पक्कापक्की थियो । राजा हुँदैमा उनमा रहेको उदण्डता खरानी भैहाल्दैनथ्यो ।
गधाको सिंगझै गायव हुदैनथ्यो । त्यो त उनको प्रवृत्ति बनिसकेको थियो । अहिलेको नेताहरु भ्रष्टाचारबाट विरत हुन नसकेजस्तै हो त्यो अवस्था । पारस शाह राजा भैदिएका भए के हुँदो हो ? कल्पना गरौं त । चाहेर पनि उनको युवराज पद जनताले खोस्न सक्दैनथे । यी त खराब भएर निस्कने सम्भावन छ, अर्कोलाई युवराज बनाउँ भन्न मिल्दैनथ्यो । नागरिकलाई त्यस्तो अधिकारै थिएन ।
जनताले चाहे पनि नचाहे पनि श्रीपेच युवराज घोषित भैसकेका उन पारस शाहको शिरमा सुशोभित हुने थियो । एउट ख्याल राख्नुपर्ने कुरा के हो भने यतिखेर वदमासीमा उत्रेका नेताहरुलाई जनताले पाता फर्काउन सक्नेछन् । त्यसो भएन भने पनि मतद्वारा दण्डित गर्न सक्नेछन् ।
बदल्न सक्नेछन् । तर राजा वा युवराज भनेको त्यस्तो होइन । जनताले जहिले चाह्यो त्यैले फेर्न मिल्दैन । राजा त के युवराजलाई समेत जनताले चलाउन नपाउने व्यवस्थाको पक्षमा बोल्न लेख्न सचेत र विवेकशील नागरिकहरुले लाज मान्नुपर्दैन ?! हो हुनत, विवेक मरेपछि मान्छेले लाजशरम पचाउँछ । साँचै हो नकच्चराको ओखति हुदैन !!!